मन्त्री स्थापितमाथि यौनहिंसाको संगिन आरोप ! भनेको नमान्दा जागिरै चैट::Hamrodamak.com
मन्त्री स्थापितमाथि यौनहिंसाको संगिन आरोप ! भनेको नमान्दा जागिरै चैट
काठमाडौं, ५ कात्तिक। प्रदेश नम्बर ३ का भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापितमाथि यौनहिंसाको आरोप लागेको छ । लगभग १५ वर्ष पहिला स्थापित मेयर हुँदा उनले महिला कर्मचारीमाथि यौनहिंसा गरेको पीडित महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाएकी छन यधपि स्थापितको प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म बाहिर आईसकेको छैन ।
पत्रकार तथा महानगरकी तत्कालीन अधिकृत रश्मीला प्रजापतिले सामाजिक सञ्जालमा घटनाबारे उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मेयर स्थापितको कुरा नमान्दा मैले जागिर गुमाउनु पर्यो, उनी यौनहिंस्रक हुन् ।’ रश्मीलाले मन्त्री स्थापितले अँझै पनि महिलामाथि यौनहिंसा गरिरहेको बताएकी छन् । उनले दर्जनौ महिलाले स्थापितका कर्तुतबारे आफूलाई बताएको समेत सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छन् ।
उनका अनुसार त्यति बेला मेयर स्थापितले प्रमोसन दिन्छु शनिबार मसँग रिसोर्टमा जानुपर्छ भनेका थिए । उनले बारम्बार रश्मिलालाई शनिबार मिर्टिग गर्ने र त्यो पनि रिसोर्टमा भन्दै आएका थिए । एक दिन उनले गाडी नै पठाएर बोलाएकोसमेत रश्मिलाको दाबी छ । आफूले स्थापितको कुरा नमान्दा जागिरसमेत गुमाएको बताएकी छन् ।